Cuntada badda Mediterranean: waa cuntooyinka ugu fiican ee nolol caafimaad leh | Ragga Stylish
Cuntada badda Mediterranean-ka waxaa ka buuxa dhadhan iyo cunno tayo leh. Waxay sidoo kale la xiriirtaa faa'iidooyin caafimaad oo badan. Taas ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah xulashooyinka ugu caqliga badan ee cuntadaada. Xaqiiqdii, xeel dheerayaal badan ayaa aaminsan inay tahay mid aan lala tartami karin.
Wadamada ku hareeraysan badda Mediterranean waxay ku raaxaystaan ​​noocyo kala duwan oo noocyo cusub ah, oo dhadhan fiican leh iyo xilliyeed. Waxayna ka muuqataa kolestaroolkaaga iyo cadaadiska dhiiggaaga, iyo sidoo kale wadnahaaga iyo maskaxdaada. Cuntada badda Mediterranean ayaa kaa caawin karta inaad lumiso caloosha iyo tan ugu muhiimsan: cimri dheeree noloshaada.
1 Aasaaska cuntada Mediterranean
1.1 Dufanka caafimaadka leh
1.2 Cunto cusub
1.4 Dhir udgoon
2 Cuntada liiska wax iibsigaaga
3 Sida caloosha loogu lumiyo cuntada Mediterranean
3.1 Isku dar cuntada iyo tababarka
4 Cuntada badda Mediterranean waxay xoojineysaa caafimaadkaaga
Aasaaska cuntada Mediterranean
Cuntada badda Mediterranean waxay ku raaxeysataa sumcad wanaagsan adduunka oo dhan. In kasta oo aysan jirin waddo rasmi ah oo loo raaco, aasaaskeedu waa inuu noqdaa kuwan soo socda:
Si ka duwan cuntooyinka kale, badda Mediterranean-ka kaliya uma oggolaato qaadashada dufanka, laakiin tan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah nafaqooyinka muhiimka ah. Si kastaba ha noqotee, ma aha oo kaliya nooc dufan ah oo shaqeyn doona, laakiin waa lagama maarmaan in la hubiyo inay caafimaad qabaan. Taasi waa kiiska looska, saytuunka ama saliida saytuunka. Noocyadaas dufanka ahi waxay dhadhanka ku darayaan suxuunta, waxay siinayaan tamar waxayna ka hortagaan cudurrada.
Bedelkii, jiritaanka dufanka xun ee cuntada Mediterranean waa mid aad u hooseeya. Sababta ayaa ah in cuntooyin badan oo cusub ay ka badan yihiin kuwa la warshadeeyo, kuwaas oo hodan ku ah dufanka buuxa iyo kuwa dufanka badan. Qaabkan baruurta waxaa loo arkaa mid u wanaagsan wadnahaaga iyo caafimaadkaaga guud.
Mid ka mid ah sababaha cuntada Mediterranean-ka ay caafimaad u tahay waa taas badanaa waxay ku saleysan tahay cunno cusub iyo xilliyeed. Cuntada badda Mediterranean waxay hodan ku tahay miraha, khudradda, digirta, lowska, kalluunka iyo kalluunka qolofta leh. Waa in la ogaadaa in fawaakihda iyo fawaakihda badan ay ka dhigayaan cunno aad u hodan ku ah antioxidants-ka.
Waxa kale oo ku jira hilibka, gaar ahaan hilibka cad. Taabadalkeed, waa inay kuyartahay dufanka xun, hilibka cas, iyo sonkorta. Caanaha waxaa loo oggol yahay qaddar yar, gaar ahaan caano fadhi iyo jiis.
Cabitaanka ugu wakiilka badan ee cuntada Mediterranean waa khamri cas. Inta lagu jiro cuntada iyo dhexdhexaadka (waxaa jira hadal ah laba koob maalintii ugu badnaan), khamriga ayaa lala xiriiriyay faa'iidooyinka caafimaadka. Sida cuntooyinka kale ee ku jira cuntada badda Mediterranean, sirtu waa in si dhexdhexaad ah loo cuno.
Sida loo sameeyo mojito
Xawaashku waxay door aad u muhiim ah ka ciyaaraan dhadhanka cuntada Mediterranean, iyo sidoo kale qaar ka mid ah faa'iidooyinkiisa caafimaad. Haddii aad rabto inaad raacdo cuntadan, Jikadaada kuma waayi doontid laurel, rosemary, basil ama basbaas.
Cuntada liiska wax iibsigaaga
Cuntada cusub iyo noocyada kaladuwan waa inay ku badnaadaan gaadhigaaga wax iibsiga. Aynu aragno waa maxay cuntooyinka muhiimka ah ee lagu cuno qaabka Mediterranean.
Sida caloosha loogu lumiyo cuntada Mediterranean
Nolosha Mediterranean ayaa kaa caawin karta inaad lumiso caloosha. Marka loo barbardhigo meelaha kale, culeys yar ayaa ka jira badda Mediterranean. Hab nololeed aad u dabacsan ayaa kuu oggolaanaya inaad waqti badan ku qaadato inaad wax cunto, iyo inaad si tartiib ah wax u cuntid waxay kuu ogolaaneysaa inaad dareento dhereg cunno yar. Laakiin halkaas faa'iidooyinkoodu kuma dhammaanayaan inay miisaanka xad-dhaafka ah ka celiyaan meesha. Cuntada badda Mediterranean ayaa sidoo kale hodan ku ah cuntooyinka leh waxyaabo dhereg leh.
Si aad waxtar badan u yeelato waxaa lagama maarmaan ah in qeybaha la xakameeyo si la mid ah sida aad ku sameyn laheyd inta ka hartay qorshooyinka cuntada. In kasta oo ay ka kooban tahay cuntooyin caafimaad leh, haddana kalooriyadiisu si dhakhso leh ayey isugu dari kartaa. Waxaad sidoo kale codsan kartaa xaddidaadda kalooriga si aad uga dhigto yareynta dhexda mid deg deg ah oo aad u muuqata.
Ugu dambeyntiina, waxaa xusid mudan taas Cuntada badda Mediterranean-ka waxay ka mid tahay qorshooyinka caafimaad ee ugu badan ee dufanka lumiyo, laakiin ma ahan kan ugu dhaqsaha badan. Waana inaan loo abuurin ujeedadaas, sida ay ugu dhacdo cuntooyinka kale. Sidan oo kale, haddii aad haysato waqti yar oo aad miisaanka ku dhimo, waxaa fiicnaan karta inaad isku daydo qaab kale oo si gaar ah loogu talagalay.
Isku dar cuntada iyo tababarka
Fiiri maqaalka: Jimicsiyada si ay caloosha u weynaadaan. Halkaas waxaad ku ogaan doontaa sida looga takhaluso dufanka caloosha loona helo calool xoog leh oo qeexan.
Cuntada badda Mediterranean waxay xoojineysaa caafimaadkaaga
Cunto caafimaad leh sida badda Mediterranean-ka kaliya ma ahan inay dharkaaga ka caawiso inay fiicnaadaan, laakiin sidoo kale waxay xoojineysaa caafimaadkaaga iyadoo la yareynayo halista ah inay ku dhacaan cuduro badan.
Faa'iidadeeda ugu wanaagsan ee la yaqaan waa yareynta halista cudurada wadnaha iyo xididdada. Laakiin cuntada Mediterranean ayaa sidoo kale lala xiriiriyay ka hortagga sonkorowga iyo noocyada kansarka qaarkood, iyo sidoo kale cudurka Parkinson iyo Alzheimers. Sirta waxaa laga heli karaa noocyada kala duwan ee antioxidants ee cuntadani ay jidhka siiso. Si aad u hubiso in arintu sidan tahay, iskuday inaad ku haysato midabada ugu badan ee suurtogalka ah taarikadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntada Mediterranean
Kuwa wax gubaya